Dhagarta Xabashida iyo Dhug la’aanta Soomaalida. – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Arrintaasi waa tan keentay inay ugu dambayntii ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom?! Tusaale:
„Haddii aad ka soo baxsato nin kuu hanjabay oo ku yidhi waan ku dilayaa, ka dibna aad magan gasho koox kale, balse, kooxdii kale kuu xerayso qol mugdi ah oo ay ku jiraan dhammaan inta cadow u ah dadka, Bahal iyo cayayaan oo ku cuni kara“ taasi malagu tilmaami karaan ammaan sugid iyo badbaadin Maya ee waa ka dhammeyn fudud, sida tan maanta dalkeena haysata.
Waa in dalkeenna nalagu cashuuro haddaan diidnona xitaa masaajiddada nalagu dhexdilo. Horumarku waa in kooxda Xabashi kalkaalku cidey doonan dilaan, dhacaan, kufsadaan, boobaan oo xasuuqaan cid ka hadli kartaana aysan jirin.
Waxaan qoraalkayga ku soo afjarayaa, gabaygii Abwaan Salaan Carrabeey Eebbe naxariistiisa janno ha ka waraabiyee, wuxuu yidhi:
Dhashaaday sugtaa xaajadaad dhawrataa abide”